အထွေထွေမှတ်ချက် | ပဲ့ချိတ်လှေမော်တော်ပြုပြင်ခြင်း
သင်သည်ဤ site, လှေ, မော်တာ, ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. မှတ်ချက်များထားခဲ့ပါ, ဒါမှမဟုတ်ပဲရိုးရိုးဟယ်လိုပြောပါနှင့်သင့်ထံမှရှိရာကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနိုင်ရှိရာဒီနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု. မရှိ, နိုင်ငံရေး, ပြက်လုံး, ဒါမှမဟုတ်ဒီ site များအတွက်သင့်လျော်သောမဟုတ်ဘူးဘာမှ။ သင် ... ရမည် Login သငျသညျမှတ်ချက်များစွန့်ခွာရန်ဆန္ဒရှိလျှင်။
ကတင်ပြ jwb.jw17 06: 28 - Wed, 2017 / 15 / 41 အပေါ်
61 / 62 ဂျွန်ဆင် 3hp ပေါက်ကြား
သငျသညျကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်အကူအညီလိုအပ်ပါတယ်။ ငါသည်ဤဟောင်းအင်ဂျင်သွားရတဲ့အကြောင်းကိုသွားပြီ, ငါအဟောင်း 52-54 evinrude ကို manual အနေဖြင့်အနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့်ဒီဖြင့်နှင့်အတူဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းကိုဘာမျှရေတစ်စည်ထဲမှာအပြေးပြီးတော့တစ်ဦးပေါ်မှာသိုလှောင်ပြောပါတယ် sawhorse ငါဓါတ်ငွေ့၏သေးငယ်တဲ့ရေအိုင်ရုံရေစားသုံးမှုနှင့်အိပ်ဇောအထက်တွင်အပိုင်းအစကဲ့သို့အလျားလိုက်တောင်အောက်သေးငယ်တဲ့အပေါက်ကိုချထွက်ပေါက်ကြားခဲ့သောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာထွက်လာလို့ယူဆတယ်သလဲ? ရှေ့ (ဟောင်းကို manual နှုန်းအတိုင်း) ပိတ်သည့် carb ခြောက်သွေ့တဲ့ running ပါလိမ့်မယ်ဒီတားဆီး? ငါသည်ဤအင်ဂျင်နဲ့လေ့လာသူပေါ့ခြင်းနှင့်အကူအညီလိုအပျ ... ဒါ့အပြင်ငါအခမဲ့လက်စွဲစာအုပ် download, ရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ ... ကျေးဇူးတင်စကားည Bert
ကတင်ပြ ttravis 06: 28 - Wed, 2017 / 22 / 04 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ 61 / 62 ဂျွန်ဆင် 3hp ပေါက်ကြား by jwb.jw17
ရေနဲ့တူ t ကိုအသံ ...
ရေတစ်ပေါက်ကြားရေနံတံဆိပျအားဖြင့်သင်တို့၏အောက်ပိုင်းယူနစ်ရေနံသို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်တူသောဒါဟာအသံ။ အဆိုပါ powerhead အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဓာတ်ငွေ့ပေမယ့်ရေအဘယ်သူမျှမ / ရေနံကျောထွက်ပေါက်ကြားဖြစ်ကောင်းဓာတ်ငွေ့နဲ့တူလှပါတယ်။ ဤမော်တော်ကားရှတ်ပတ်ပတ်လည်ကိုသွားကြောင်းရော်ဘာဖျံဖြစ်ကြသည်။ အစားထိုးပေးဖို့ဘုံက...ပိုကြည့်ရှုပါ
ကတင်ပြ ttravis 06: 28 - Wed, 2017 / 22 / 09 အပေါ်
ဤတွင်ကျွန်မမော်တော်ကားရှတ်ရေနံတံဆိပျမြားအပါအဝငျ, သင့် JW-17 များအတွက်အတူတကွထားအစိတ်အပိုင်းများများ၏စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ http://outboard-boat-motor-repair.com/motors/Johnson%203.0%20HP%201961-…
ကတင်ပြ jwb.jw17 06: 29 - Thu, 2017 / 00 / 21 အပေါ်
သငျသညျ ttravis ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါကငါ့အရောထွေးရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှိပြီးပါကအလျင်အမြန်စိမ်းပြာရောင်2လေဖြတ်ရေနံထွက်ခွာအငွေ့ပျံအတူတူအစိမ်းရောင်အရောင်ရှိပြီးဓာတ်ငွေ့တစ်ခုဖြစ်သည်သေချာပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကို copy ..could အချို့အမည်မသိအကြောင်းပြချက်အဘို့သင့်တစ်ခုလုံးကို post ကိုဖတ်ပါနှင့် e-mail, က paste နိုင်ဘူး။ ငါမှာတယ် jeremy.w.bert@gmail.com ။ ငါကပဲရိုးဟာကျားကန်စည်းဝေးပွဲကိုချိတ်ဆက်ဘယ်မှာအောက်ကသေးငယ်သောအပေါက် stbd ဘက်ထွက်လာမယ့်ခဲ့သည်ကိုသတိပြုမိသောအခါငါအရင်းအမြစ်နေရာချထားနိုင်လျှင်ကြည့်ဖို့အောက်ပိုင်း shroud ချွတ်ယူခဲ့သည်။ ဒါဟာကိုယ်နှိုက်ကိုထင်ရှားစွာပြမှနေ့ချင်းညချင်းကိုယူ။ အခြားမည်သည့်စိတ်ကူးများ? ဒါဟာနီးပါးက၎င်း၏တစ်ဦးလျတ်တူသောအရာနှင့်တူပုံရသည်။ ငါဆိုဒဏ်ငွေ running ဖြစ်ဟန် ... နှစ်ကြိမ်ဤအမှုကိုစီရင် ... အဆို့ရှင်နှစ်ဦးစလုံးရှိသည်နှင့်ပိတ်ထားရင်ဖွ ??? thအဆိုပါတစ်ကျော့ပြန်အဘို့အ anks ...
ကတင်ပြ ttravis 06: 29 - Thu, 2017 / 09 / 07 အပေါ်
မသေချာပါ။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ...
မသေချာပါ။ ဒါဟာ powerhead ကနေမော်တော်ကားရှတ်ချပေါက်ကြားနိုငျသညျ။ သင်ကအစပြုရာပါလျှင်ကြည့်ရှုရန် powerhead ချွတ်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။ သငျသညျအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအရေအတွက်ကလိုအပ်လျှင်ငါ့ကိုသိစေ, ငါသည်သင်အဘို့အတွေ့ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါအဟောင်းတွေအင်ဂျင်များအတွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုဝင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ကွင်းနဲ့ဖျံညှိ-up, စိတျအပိုငျးအပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ရောက်လိမ့်မည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်မမေးရန်ရှိသည်မေးခွန်းကြီးကဘယ်လောက်ပေါက်ကြားဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်စိုးရိမ်ထိုက်သည်ကိုခန့်မှန်း။ ငါကသေးငယ်တဲ့ယိုစိမ့်ရှိသည်ဖို့ဘာမှနာကျင်နေသည်ထင်ကြပါဘူး။ သင်ပိုကောင်းတဲ့အဖြေကိုရစေခြင်းငှါ, ဘယ်မှာ iboats.com မှာရှေးရှေးမေးရန်လိုပေမည်။
ကတင်ပြ jwb.jw17 06: 29 - Thu, 2017 / 12 / 07 အပေါ်
ကျေးဇူးတင်ပါသည် USCG စိုးရိမ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ပေါက်ကြား, ttravis
ကောင်းပြီငါကပိုဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပေါက်ကြားခဲ့ကြောင်းယနေ့နံနက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အများကြီးပေမယ့်ရေပေါ်မှာဆီရောင်ထားရန်မလုံလောက်ဘူး! ကျနော်တို့မြေးသွားရောက်မစ်ရှင်ဂလားပင်လယ်အော်, SanDiego မှလှေ / ကယူပါလိမ့်မည်သူတို့မည်သည့်လေထုညစ်ညမ်းမှုအကြောင်းကိုဆင်းရှိအလွန်အခွံမာသီးဖြစ်ကြသည်။ တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးညစ်ပတ်ဟောင်းနွမ်း coot (ရွှံ့ကြက်) တစ်ဦးအဆိပ်ပုရွက်ဆိတ်ကိုစားစေခြင်းငှါ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချအဲဒီမှာသင့်ရဲ့ RV ထဲကပုရွက်ဆိတ်တွေကိုစောင့်ရှောက်ရန်အဆိပ်ပက်ဖြန်းဘို့သင့်ကိုသတင်းပေးပို့ !!! သငျသညျ "တန်ခိုးဦးခေါင်း" လို့ပြောတဲ့အခါငါကယူ, သင်တစ်ခုလုံးကို starter / ဓာတ်ငွေ့အကြံပေးအဖွဲ့နှင့်စက်နှိုးစည်းဝေးပွဲကိုဆိုလိုပါသလော ကျွန်မရန်ရှိသည်သွားပါ၏ဟန်တူပါသည်။ ငါအဆို့ရှင်ပိတ်ထားဓာတ်ငွေ့ပေါက်ကြားကြောင်းစဉ်းစားရန်စတင်တာပါ။ အဆိုပါပိတ်ဆို့ကိုပိတျထားကတည်းကသူကပေါက်ကြားရန်လုံလောက်သောလေကြောင်းရန်ရရှိရန်ဓာတ်ငွေ့ပေါက်ကြားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်လေဟာနယ်တစ်ခုအနေဖြင့်ကြာပါသည်။ ဒါကြောင့်တိုင်း 24 နာရီသို့မဟုတ်ဒီတော့ဖြစ်ပျက်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ငါစိုစွတ်သောကြည့်ရှုသော carb ၏အပြင်ဘက်တွင်မရာအရပျကွညျ့ပါ။ အဆိုပါ carb ကြောင်းအပေါက်မှဆင်း drains တစ်ခုလျတ်စနစ်တရပ်ရှိပါသလား? ဒါဟာသောပိတျဆို့ရှင်ပေါက်ကြားမသာပေမယ့်ပိတ်ဆို့အဆို့ရှင်နှင့်အများလွန်းကတော့ float ပန်းကန်ထဲမှာဆေးထိုးအပ်အဆို့ရှင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဖုန်။ ကျနော်ကျိန်းသေသည့် carb ပြန်လည်တည်ဆောက်မယ့်ငါနှင့်ငါမင်းအဖြစ်ကောင်းစွာအကြောင်းကိုပြောပြတယ်ကြောင်းတံဆိပျကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်။ ငါရေကြောင်းအင်ဂျင်အပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး2လေဖြတ်, ဒါပေမယ့်ငါဆိတ်ကွယ်ရာကိုအောင်မြင်စွာ .. မဆိုအကြံပေးချက်များတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်လို့ .. သင် Travis ကျေးဇူးတင်ပါသည်များစွာသော carb ကိုက်ကြဖူးဘူး! J ကို Bert
ကတင်ပြ ttravis 06: 29 - Thu, 2017 / 17 / 46 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ကျေးဇူးတင်ပါသည် USCG စိုးရိမ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ပေါက်ကြား, ttravis by jwb.jw17
အဆိုပါ powerhead မျှမျှတတလွယ်ကူသည် ...
အဆိုပါ powerhead ဖယ်ရှားပစ်ရန်မျှမျှတတလွယ်ကူသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုဤအရပ်၌အကြောင်းကိုဖတ်နိုင်သောငါ၏ 5.5 HP ကဂျွန်ဆင်ညှိ-up, စီမံကိန်းကို၌ဤအမှုကိုပြု: http://outboard-boat-motor-repair.com/Johnson/Remove%20Lower%20Unit%20a…
ငါသည်လည်းအခြေခံအားဖြင့်သင်တို့ကိုယျကဲ့သို့တူညီသောအရာတစ်ဦး3HP က Evinrude အပေါ်တစ်ဦး writeup ရှိသည်။ သင်ဒီမှာအကြောင်းဖတ်နိုင်: http://outboard-boat-motor-repair.com/Evinrude%203%20HP%20Lightwin%20Ou…
အဆိုပါ carb နှင့်စက်နှိုးဒါအလားတူကြောင့်ငါနှစ်ဦးစလုံးကိုဖတ်ရှုအကြံပြုလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ grandkids နှင့်အတူကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပျော်စရာရှိသည်။ ငါရေကန်မီချီဂန်အပေါ် Wisconsin ပြည်နယ်အတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မအဖြစ်ကောင်းစွာအဲဒီမှာတက်ဘို့ link တစ်ခုရှိသည်: https://www.youtube.com/watch?v=xC7QiRaJTbI&t=55s
ငါသည်ငါ့3HP က Evinrude အသစ်တစ်ခု shutoff အဆို့ရှင်လိုအပ်ပါတယ်။ ငါတစျဦးကိုရှာဖွေသည့်အခါငါသည်သင်တို့သိစေပါလိမ့်မယ်။
ကတင်ပြ jwb.jw17 06: 29 - Thu, 2017 / 22 / 45 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ အဆိုပါ powerhead မျှမျှတတလွယ်ကူသည် ... by ttravis
Powerhead နှင့် carb
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မပထမဦးဆုံး carb လုပ်ပေးပြီးတော့ပေါက်ကြားမှုအတွက်ကိုပြန်စစ်ဆေးစေခြင်းငှါစဉ်းစား။ ထို့နောက်ပါဝါခေါင်းကိုကိုင်တွယ်,
ကတင်ပြ ttravis 07: 01 - Sat, 2017 / 02 / 37 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ Powerhead နှင့် carb by jwb.jw17
3 နှင့်ပြောင်းလဲရန်အခြားမော်ဒယ်များအပေါ်လည်းမရှိလို 5.5 HP ကမပြောင်းကုန်ပြီလှံတံရှိပါသည်။
ကတင်ပြ jwb.jw17 06: 29 - Thu, 2017 / 22 / 57 အပေါ်
ကတင်ပြ jwb.jw17 06: 29 - Thu, 2017 / 23 / 00 အပေါ်
61 ဂျွန်ဆင် 3HP JW17
ကတင်ပြ jwb.jw17 06: 29 - Thu, 2017 / 23 / 08 အပေါ်
ငါသည်သင်တို့၏ဤကဲ့သို့သောငါ့ကိုကူညီဖို့ရန်အချိန်ယူကိုတကယ်တန်ဖိုးထား ... ငါထက်အသက်ငယ်ဒီနည်းနည်းအင်ဂျင်က၎င်း၏သာ 10 နှစ်ပေါင်း ချစ်. ငါ့ 14 ခြေလျင်သစ်သားပျံ့လှေဿုံ .I'll ငျသညျငါ့တိုးတက်မှုအပေါ် posted စောင့်ရှောက်ကိုက်ညီ ... ငါလက်ျာဘက်ယခု burner အပေါ်သိပ်အရာများစွာကိုရှိသည်။ ဂျယ်ရမီ
ကတင်ပြ jwb.jw17 06: 30 - Fri, 2017 / 21 / 24 အပေါ်
ငါပိတ်အဆို့ရှင်ပေါက်ကြားမှန်းဆသကဲ့သို့ငါအကြံပေးအဖွဲ့ကိုဖယ်ရှားသည့်အဆို့ရှင် reinserted နှင့်ထုတ်ဆေးကြောဖို့ဓာတ်သတ္တုဝိညာဉ်များအတွက် pored ။ ငါဖွင့်ထားသူကပိတ်ဆို့နှင့်အတူထိုင်ကြကုန်အံ့ကြောင့်ပေါက်ကြားခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့နေဆဲလုပ်ခဲ့တယ်ပိတ်လိုက်ပေမယ့်အနိုင်နိုင်အတူ။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သံချေး / ဖုန်သာသေးငယ်သောနည်းနည်းထွက် လာ. , ဦးထုပ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု .someone ဤအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့က yanked ၏ရပါမယ်နှင့်ပိတ်ဆို့ completly တံဆိပ်ခတ်ထားမထားဘူးအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ် ..
ကတင်ပြ jwb.jw17 06: 30 - Fri, 2017 / 21 / 58 အပေါ်
သင့်ရဲ့ 5.5 HP ကတွင်သင်သည်ချွတ်ယူချိတ်ဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါဒီတစ်ခုအပေါ်မဆိုမမြင်ရပါဘူးသာ5screw နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ့သေးမပယ်ရှားသောချုပ်ရိုးအထက်အနည်းငယ်ပန်းကန်ရှိပါသည်။
ကတင်ပြ jwb.jw17 06: 30 - Fri, 2017 / 22 / 01 အပေါ်
2 screw နှစ်ခုအသီးအသီးအခြမ်းနှင့်အဆုံးအပေါ်တဦးတည်း
ကတင်ပြ ttravis 07: 01 - Sat, 2017 / 02 / 39 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ပါဝါကိုဦးခေါင်းသည်အခြားဘက်ခြမ်း by jwb.jw17
ငါထွက် rip နှင့် intall မယ်လို့ ...
ငါထွက် rip နှင့်အသစ် plug ကိုဝါယာကြိုးများ intall လိမ့်မယ်။ ငါထွန်စက်ထောက်ပံ့ရေးမှာသတ္တုတွင်းတယ်။ ငါကပိုနိုးဖြစ်ကြောင်းကိုသောအခါငါမနက်ဖြန်သင်တစ်ဦး link ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အရှည်ကိုတိုင်းတာရန်အဟောင်းကိုဝါယာကြိုးများသိမ်းဆည်းပါ။
ကတင်ပြ ttravis 07: 01 - Sat, 2017 / 06 / 57 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ငါထွက် rip နှင့် intall မယ်လို့ ... by ttravis
http://outboard-boat-motor-repair.com/parts/18-5225%20Spark%20Plug%20Wi… သို့မဟုတ် "18-5225" တွင်ဆိုက်ရှာဖွေရေးနှင့် plug ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်
ကတင်ပြ jwb.jw17 07: 01 - Sat, 2017 / 13 / 37 အပေါ်
အတိအကျကိုငါ့စိတ်ဓာတ်က OK ။ ငါနောက်တဖန်အကူအညီနဲ့ ..thanks လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ငါအတွက်ပြန်လည်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ် ... ပါဝါခေါင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အတူရှေ့ဆက်ပြီးတော့အစိတ်အပိုင်းများမိန့်ရမယ့်တာ!
ကတင်ပြ jwb.jw17 06: 30 - Fri, 2017 / 22 / 16 အပေါ်
မီးပွား plug ကိုဝါယာကြိုးများ
ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ !! တစ်စုံတစ်ဦးကယ့်ကိုဝါယာကြိုးနှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်တဦးတည်းရေပိုက်ညှပ်သူကထိုကဲ့သို့သောကြီးမားမီးသီးအဆိုပါပစ္စည်းများအားဖြင့်ဖန်ဆင်းထားသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဝါယာကြိုးဝက်အတွင်း pinched နေသောအစာရှောင်ခြင်းအနေအထားမှနျလှုံ့ဆျောသညျ့အခါအဘယ်သည်အခြားသိတယ်နှင့်အတူဤတက် (ဂီယာ chafing) ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကလှုံ့ဆျောဒါထို့နောက်သူက greased သိရသည်။ သင်ဘာလုပ်မလဲ ? ငါကဖြတ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့တစ်ခုခုနှင့်အတူတက်လာချင်တယ်။
ကတင်ပြ jwb.jw17 06: 30 - Fri, 2017 / 22 / 18 အပေါ်
ကတင်ပြ jwb.jw17 06: 30 - Fri, 2017 / 22 / 20 အပေါ်
ကတင်ပြ jwb.jw17 07: 06 - Thu, 2017 / 14 / 43 အပေါ်
ဤသည်3/4လက်မအစက်အပြောက်အားလုံးကြောင်းအောက်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဖြူမဟုတ်ကြေးနီဆင်း
ဖယ်ရှား junk ...
ကတင်ပြ jwb.jw17 07: 06 - Thu, 2017 / 14 / 48 အပေါ်
ထိပ်တန်းဆလင်ဒါ 60lbs, အောက်ပိုင်း 50 ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ပါက gasket ကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်ပတ် သက်. / ခေါင်းကိုဆွဲခြင်းနှင့်စစ်ဆေးလိမ့်မယ်။ ကွင်းကဒီအင်ဂျင်နေဆဲမရရှိနိုင်ပါသလား?
ကတင်ပြ jwb.jw17 08: 04 - Fri, 2017 / 10 / 40 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ compression စမ်းသပ် by jwb.jw17
JW 17 စီမံကိန်းကို
Travis မင်္ဂလာပါကျနော်နောက်ဆုံးမှာနောက်တဖန်ဒီအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့အချိန်အတန်ကြာတယ် .. ငါ ... ဒါဟာအဟောင်းတံဆိပ်ကိုထွက်တူးဖို့ငါ့ကို3နာရီကိုယူအောက်ပိုင်းဂီယာကိစ္စတွင်ပြန်လည်တည်ဆောက်! တကယ်တော့ရေမရှိသောဂီယာ box ကိုရေနံ၌ရှိ၏ကတည်းကထုတ်ယူပြီးရင်းစိတ်မကောင်းစတင်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာသစ်ကိုတံဆိပ်ခတ်သစ်စေ့ဆော်၌ရှိကြ၏။ ငါ gasket အောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှပါဝါခေါင်းကိုတံဆိပ်ခတ်ထား permatex ဖို့လိုအပ်ပါသလား? အရမ်းဒီ permatex မှ OK ကိုခေါင်းကိုလည်း gasket? ကျွန်မပထမဦးဆုံးအကိုတောင်းတယ်ဒါကြောင့်ငါအဏ္ဏဝါအင်ဂျင်သို့မဟုတ်2လေဖြတ်ပြုမိဖူးပါဘူး။ ကြေးဇူးတငျစကား
ကတင်ပြ ttravis 08: 04 - Fri, 2017 / 11 / 56 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ JW 17 စီမံကိန်းကို by jwb.jw17
သင့်ရဲ့ permatex ပယ်ရှား! သငျသညျ ...
သင့်ရဲ့ permatex ပယ်ရှား! သငျသညျကိုယျခန်ဓာဖို့ powerhead, ဒါမှမဟုတ်ဦးခေါင်းကို gasket တံဆိပ်ခတ်ထားဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
ကတင်ပြ jwb.jw17 08: 05 - Sat, 2017 / 10 / 50 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ သင့်ရဲ့ permatex ပယ်ရှား! သငျသညျ ... by ttravis
OK ကိုကျေးဇူးတင်စကား, ကိုယ့်သူတို့အပျေါမှာအလုပ်ကို clean up ကောင်းတစ်ဦးပြုပါလိမ့်မယ်။ အကြှနျုပျ၏ carb ကိရိယာအစုံ ..I တံဆိပ်ခတ်ထားတဲ့မူရင်းခဲ့တာကြောင့်သောကြေးဝါအရောင်နှင့်စာသား 55 နှစ်ကြာအတွက် welded ခဲ့သည်ထင်မကြာမီကဒီမှာဖြစ်သင့် !! နဂိုအတိုင်းပြောင်းလဲနေတဲ့အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်ငါအံ့ဩခြင်းနက်နဲသောအရာရေနံကုသမှုစွမ်းရည်ကိုပိတျထားသောရွှေကွင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်မျှော်လင့်တယ်သော်လည်းငါပစ္စုပ္ပန်ချုံ့ 50 နှင့် 60 နှင့်အတူလိုက်သွားနဲ့ကျွန်မပြန်အတူတူနေဖြင့်ဦးခေါင်း gasket ရသည့်အခါကတိုးတက်ကောင်းမွန်မျှော်လင့်တယ် ။ ငါ 31 မော်ဒယ်အရပျ၌အပေါငျးတို့သ4piston rusted တစ်ဦးအက်ဦးခေါင်းနှင့်ပုရေခဲ့ကြောင်းတစ်ဦးက Pickup ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မဦးခေါင်းအားဖယ်ရှားခြင်းနှင့် MMO နှင့်အတူဆလင်ဒါပြည့်စေတော်မူ၏။ တစ်ဦး werk နောက်မှငါအတွက် handcrank မှီဝဲနှင့် 8 ပေါင်ပျဉ်ကို ယူ. ပတ်လည် crank bang နှင့်အမှုအရာကိုပြောင်းရွှေ့ရဖို့ကြိုးစားနေစတင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းမှာကျွန်မလက်နိုင်ခဲ့သည်ကြောင့်အနည်းငယ်လက်မနှင့်နေ့တိုင်းအနည်းငယ်ပိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ကြောင့် .About3လအတွင်းပြီးပြည့်စုံအလှည့်သွား၏ပထမဆုံးနေ့က crank နှင့်ပေါ်မှာအခြားဦးခေါင်းပါးရိုက်, ကအချိန်ကုန်ဆုံးကညာဘက်ကိုတက်စတင်ခဲ့ပြီး !!! တစ်ဦးကအံ့ဩခြင်းနှင့်မော်ဒယ်တစ်ဦးနှင့် MMO ၏သက်တမ်းမှသေတမ်းစာ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်တွမ်, သင်တို့ကိုငါကထွက်လှည့်ပုံကိုသိပါစေပါလိမ့်မယ်။
ကတင်ပြ jwb.jw17 08: 05 - Sat, 2017 / 22 / 36 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ကြေးဇူးတငျစကား by jwb.jw17
မင်္ဂလာပါတွမ်,5အကြောင်းကိုဒီနေ့လယ်နောက်ဆုံးတော့အလုပ်လုပ်ငါ့ဆိုင်သို့ရတယ်။ အဆိုပါ carb ကိရိယာအစုံမေးလ်ထဲမှာလာ၏။ အဟောင်းကတော့ float အပ်အဆို့ရှင်အဘယ်သူမျှမကလစ်နဲ့သတ္တုအစွန်အဖျားထက်ရော်ဘာ ..I တစ်သူတစ်ဦးအချိန်အလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ကနည်းနည်းငုံ့ဖို့ကလစ်ရတဲ့လိမ့်မယ်ခဲ့သောကြောင့် installed တယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါက၏ရည်ရွယ်ချက်သေချာဆေးထိုးအပ်ကတော့ float နှင့်အတူပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်စေရန်ဖြစ်ပါသည်ဆိုပါစို့။ မူရင်းအဆို့ရှင်ထိပ်ပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမ groove ခဲ့ ... ဒီတော့မီးလျှံဖမ်းဆီးမှုများနှင့် carb နောက်ကျောအောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်တွင်ခေါင်းကို installed နှင့်ပါဝါခေါင်းကိုဖြစ်ကြသည်။ သင့်ရဲ့ site ပေါ်တွင် Evinrude ကို manual ဂီယာကိစ္စတွင်ဖြည့်ရန်၎င်း၏ဘက်မှာအင်ဂျင်ထားရန်မိန့်တော်မူ၏။ ငါပြု ... မေးခွန်း ... ?? ငါဖြောင့်သူကဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အပေါက်မှအဆင့်ခေါ်ခဲ့ဖို့ထိပ် plug ကိုထုတ်ယူသို့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့် ok ပါလိမ့်မည်သငျ့သလော ငါအလျားလိုက်အနေအထားကိုယ့်အတွက်လျတ်ကဖြည့်နေဆဲနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန် plug ကိုဝါယာကြိုးများရှိသည်။ ငါသည်လည်းငါအဆို့ရှင်အတွက် gunk ၏အတော်လေးနည်းနည်းတွေ့ပါကယခုသင်သည်အစဉ်အသစ်တစ်ခုအဆို့ရှင်အရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေ seal..Did လိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ် ... အတင့်ကားများနှင့်အဆို့ရှင်ကို install မလုပ်ခင်အခြားဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင်ယိုစိမ့်စမ်းသပ်မှုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်?
ကတင်ပြ ttravis 08: 06 - Sun က, 2017 / 12 / 22 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ JW17 စီမံကိန်းအတွက်သွားမှာတော့ by jwb.jw17
AS ဝေးအောက်ပိုင်းအဆုံးရေနံအဖြစ် ...
ဒါကြောင့်ထွက်လာမှစတင်သည်သည်အထိ AS ဝေးအောက်ပိုင်းအဆုံးရေနံတတ်သကဲ့သို့ငါများသောအားဖြင့်ကိုယ့်ဒေါင်လိုက်အနေအထားအတွက်မော်တာနှင့်အတူထိပ်တန်းပလပ်၌ပါသောဆီထားတော်မူ၏။
ကျွန်မ ebay မှာအဆို့ရှင်ပိတ်ထားလောင်စာမြင်ကြပြီနဲ့တူဒါဟာပုံရသည်, ဒါပေမယ့်ငါခဏ၌ငါ့3HP ကအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ ငါသည်ဤရုံစံ 1 /4လက်မကြေးနီသို့မဟုတ်ကြေးဝါကိုပိုက်အပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မအပေါ်အောက်ပါရှာဖွေရေးလုပ်ခဲ့တယ် အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခုရှိလျှင်အမေဇုံကိုကြည့်ပါရန်။
ကတင်ပြ jwb.jw17 08: 08 - အင်္ဂါနေ့, 2017 / 10 / 42 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ AS ဝေးအောက်ပိုင်းအဆုံးရေနံအဖြစ် ... by ttravis
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မ ebay မှာတဦးတည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ $ 55 !!!! အဆိုပါကြော်ငြာရုရှား၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါက leery ရယ်နဲ့ကျွန်မ 55 နှစ်ကောင်ပေးဆောင်ချင်ကြဘူး။ ရေနံအပေါက်ဖြည့်ဖို့ညှစ်။ ငါဒီကိုသူတို့မကျင့်တအချိန်ဖြစ်နိုင်ပါသည် ... အစဉ်အမြဲငါလိုအပ်တော့အရာအားလုံးရှိပါတယ်တဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးဆိုင်မှယနေ့မြို့သွားတာပါ။
ကတင်ပြ PatsRG8 ။ 08: 03 - Thu, 2017 / 10 / 30 အပေါ်
ကောင်းသော morning- ကိုယ့်အကြောင်းကိုငါ့အ 1956 5.5hp အပေါ်အကြံပေးအဖွဲ့ပြောင်းလဲခြင်းစီမံကိန်းကိုပြီးစီးပါပြီ။ ငါမှန်ကန်သောလောင်စာလိုင်း / လေဟာနယ်လိုင်းနှင့်အတူပြဿနာများကိုသို့အပြေးနေပါတယ်။ သငျသညျငါလုပျသောသူဖွလက်မောင်းကနေတဆင့်အစာကျွေးဖို့လိုအပ်နေငါနှင့်ငါရှိသည်ရေပိုက်အထူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုသင်အသုံးပြုမှန်ကန်သောအရွယ်အစား, ငါ့ကိုပြောပြပါလို့မရပါ။
ကတင်ပြ ttravis 08: 03 - Thu, 2017 / 11 / 22 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ 1956 ဂျွန်ဆင်အကြံပေးအဖွဲ့ပြောင်းလဲခြင်း by PatsRG8 ။
ဂျွန်ဆင် / Evinrude အသုံးပြုတဲ့လောင်စာလိုင်းအချင်း (ID) တွင်အတွင်း၌3/ 8 သို့မဟုတ်5/ 16 လက်မဖြစ်စေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်သည်မည်သည့်မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများကိုစတိုးဆိုင်မှာရနိုင်မယ့်ပုံမှန်လောင်စာလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာတွင် Amazon.com အပေါ်5/ 16 ID ကို5ခြေလျင်လိုင်းရနိုင်တဲ့ link ကိုဖြစ်ပါတယ်
ဤတွင် 1 /4လက်မ ID ကို5ခြေလျင်လိုင်းဘို့ link တစ်ခုဖြစ်ပါသည်:
ကတင်ပြ PatsRG8 ။ 08: 03 - Thu, 2017 / 12 / 02 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ အသုံးပြုတဲ့လောင်စာလိုင်းကို ... by ttravis
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါအချို့ 1 /4ဝယ်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ခုလိုင်းစနစ်ကတော်ရှိရာအောက်ခြေမျက်နှာကျက်မှတဆင့်လမ်းကြောင်းမနိုင်။ သငျသညျထို site ပေါ်တွင်အသုံးပြုသောမျဉ်းကိုသင်လုပျသောသူဖွလက်မောင်းမှ mount ခဲ့ပါဘူးဘယ်လိုတော်တော်လေးထူဟန်တူ?
ကတင်ပြ PatsRG8 ။ 08: 03 - Thu, 2017 / 12 / 06 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ လောင်စာလိုင်း by PatsRG8 ။
အဆိုပါ cowling ၏အောက်ခြေတွင်
အဆိုပါ cowling ၏အောက်ခြေတွင်။
ကတင်ပြ ttravis 08: 03 - Thu, 2017 / 22 / 14 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ အဆိုပါ cowling ၏အောက်ခြေတွင် by PatsRG8 ။
ငါ၏အစီမံကိန်းကိုတွင်, ငါမော်တာအဖုံးပေါ်တွင်တစ်ဦးတစ်ခုတည်းလိုင်းလောင်စာ connector ကိုအတူနှစ်ခုလိုင်းလောင်စာ connector ကိုအစားထိုး။ ငါမော်တာအဖုံး၏အောက်ဆုံးမှတဆင့်သို့မဟုတ်အောက်ရှိလောင်စာရေပိုက်ကိုယ်တိုင်က run ခဲ့ပါဘူး။
ငါသို့သော်သူတို့ ebay မှာအချို့ရှိပါဘူး, Amazon.com ပေါ်မှာဤမတှေ့ခဲ့ပေ။ အားရှာဖွေခြင်း
"393334 လောင်စာ connector ကို"
ကတင်ပြ newt6522 08: 13 - Sun က, 2017 / 17 / 19 အပေါ်
ငါလောင်စာရတဲ့မဟုတ်ငါတစ် 1956 qd-17 10 မြင်းကောင်ရေရှိသည်။ ငါမီးပွားရှိသည်နှင့်ကိုယ်အနည်အနှစ်များမီးသီးအတွက်မှလောင်စာဆီရတဲ့ငါပေမယ့်ငါမရှိလျှင် carb ဆွဲထုတ်ခဲ့ကြပြီးအဆိုပါဂျက်လေယာဉ်များသည်စင်ကြယ်များမှာကြောင့်ပါပဲ။ မည်သည့်အကြံပြုချက်များ
ကတင်ပြ ttravis 08: 14 - မွန်, 2017 / 00 / 24 အပေါ်
သွားရောက်လည်ပတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သငျသညျ ...
အဆိုပါ carb ချွတ် Wiith, အစားသုံးမှု manafold ကျော်သင့်လက်မသို့မဟုတ်ထန်းဝတ်နှင့် starter ကြိုးဆွဲ။ သင်သည်ထိုအချက်မှာစုတ်ယူခြင်းခံစားရနိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ မရလျှင်, ကျူပင်အဆို့ရှင်စစ်ဆေးပါ။ သင် manafold မှာစုတ်ယူခြင်းခံစားရနိုင်လျှင်, သင့် carb gaskets လေကြောင်းတင်းကျပ်စွာဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ အသေးဆုံး leek တစ်ကောက်ရိုးအတွက်င့တစ်ဦး pin ကိုကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာလောင်စာဆီများနှင့်လေထဲတွင်ဆွဲမ carb ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျသစ်တစ်ခုရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ Carb Kit သငျသညျကျောအတူတကွ carb ထားသည့်အခါ။ ဒါ့အပြင်ကတော့ float အပ်ဆို့ရှင်စစ်ဆေးချင်ပေလိမ့်မည်။
ကတင်ပြ Timreimens 08: 14 - မွန်, 2017 / 22 / 46 အပေါ်
တစ်ဦး 3hp ပဲ့ချိတ် rehabbing ပေါ်မှာရှိသမျှကြီးစွာသောအင်ဖိုအတွက်သင်ကတွမ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်မတော်တော်လေးနှံ့နှံ့စပ်စပ်စစ်ဆေးပြုပြင်တပ်ဆင်လိုအပ်သည့် $ 1964 အဘို့အကြှနျုပျ၏ပထမဆုံးလှေမော်တာတစ်ခု3Evinrude 60hp Yachtwin ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ကံကောင်းတာကအဆိုပါ carburetor စောင့်ရှောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း, ဒါပေမယ့်တခြားအာရုံကိုအများကြီးလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအချက်များနှင့် condenser ဒဏ်ငွေသလိုပဲဒါပေမယ့် plug ကိုဝါယာကြိုးများဖြစ်ကြသည်အဖြစ်ကွိုင်မကောင်းတဲ့ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဆလင်ဒါခေါင်းကိုဖုံးကိုရေဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်အိပ်ဇောအဖုံးပန်းကန်မှတဆင့် corroded တစ်ကွာဟမှုမှတဆင့်ကိုစားတော်တော်များများတွင်းရှိခဲ့ဖူးပေမယ့်ဂီယာကိစ္စတွင်အကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါစက်နှိုးအခုမှနှင့် carburetor ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် up ပြုလုပ်ပစ်ခတ်ကြောင့်ကောင်းစွာအဲသည်ပြေး။ ရုံယခုငါအသစ်တစ်ခုကိုလှုံ့ဆျောနှင့်အိပ်ဇောအဖုံးပန်းကန်နှင့် gasket အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ငါထွက်မရနဲ့ရေပေါ်မှာကကြိုးစားရန်မစောင့်နိုင်။
ကျွန်မကိုလည်းအထောက်အကူဖြစ်စေတွေ့ရှိခဲ့နှစ်ခု Youtube ကိုလင့်များအပေါ်ရှောက်သွားချင်ကြဘူး။
(ယောဟန်တောက်ပရဲ့) ဂျွန်ဆင် & Evinrude Carb ပြုပြင် 3hp 50s & 60s https://www.youtube.com/watch?v=B2bvvnotA1k
(cajuncookone) Evinrude Gale နှင့်ဂျွန်ဆင်စက်နှိုးသည်ဗီဒီယို https://www.youtube.com/watch?v=oTN8Ag_aj-8 (ရှည်လျားသော 7- 10 မိနစ် segments များပေမယ့်နှံ့နှံ့စပ်စပ်)
ကတင်ပြ Lionel 08: 21 - မွန်, 2017 / 22 / 04 အပေါ်
ငါနှစ်ခုအကြားမည်သည့်လဲလှယ်အစိတ်အပိုင်းများရှိပါတယ်စဉ်းစားကြဘူး။ အဆိုပါ 1941 ဂျွန်ဆင် 3.3 HP ကပြေးလျှင်, လောင်စာလိုင်းနေရာတွင်အစားထိုးကြောင့်ပျော်မွေ့။ ထိုသို့ဟောင်းများကိုမော်တာများအတွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုရှာဖွေရာတွင်ခက်ခဲကြလိမ့်မည်။ Evinrude မရှိတော့ကထောကျပံ့များနှင့် Sierra အဏ္ဏဝါကြောင်းဟောင်းများကိုမော်တာများအတွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုလုပ်မပေးပါဘူး။ စပျစ်သီးကိုပဲ့ချိတ်က်ဘ်ဆိုက်များအဖြစ်သငျသညျစိတျအပိုငျးကိုရှာဖွေစေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်မှာ google ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြောင်းမော်တာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
သင့်ရဲ့ 1958 ဂျွန်ဆင် 3.0 HP က JW-14 ခဲ့သေးလူကြိုက်များမော်တာဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိနိုင်အစိတ်အပိုင်းများကိုများများရှိပါတယ်။ ဤတွင်ဘုံအစိတ်အပိုင်းများကိုစာရင်းပြုစုတဲ့ link ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ငါ 1941 evinrude 3.3hp နှင့် 58 '' Johnson 3hp ရှိသည်။
မဆိုအပြန်အလှန်ပြောဆို / သဟဇာတအစိတ်အပိုင်းများရှိပါသလား
အဆိုပါ 3.3 မြင်းကောင်ရေပြေးပေမယ့်လောင်စာလိုင်းပေါက်ကြားနှင့် 3hp ပေါက်ကြားသို့မဟုတ် run မထားဘူး။
ကတင်ပြ Lionel 08: 25 - Fri, 2017 / 10 / 35 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ Evrinrude 3.3hp 1941 by Lionel
ကတင်ပြ cliffjohnsen 08: 25 - Fri, 2017 / 17 / 04 အပေါ်
ငါငါးဖမ်းသမား 5.5 ရှိတယ် ...
ငါငါးဖမ်းသမား 5.5 1956 ရှိသည်။ အသစ်သောကွိုင်နှင့်ရမှတ်အားလုံးကောင်းသောကြည့်ရှုပါ။ အဆိုပါအချက်များရှိမရှိဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်တံခါးပိတ် grounded နေကြသည်။ ငါသည်ဤမှန်သည်ထင် dont ။ အဆိုပါကွိုင်နှင့် condensor ဝါယာကြိုးချွတ်နှင့်အတူ, သူတို့ grounded ကြသည်မဟုတ်
မဆို suggestons? နှစ်ဦးစလုံးကွိုင်အစိမ်းရောင်ဝါယာကြိုးကနေ plug ကိုမှ 8ko စမ်းသပ်ရန်။ မီးပွားပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသည်။
ကတင်ပြ ttravis 08: 26 - Sat, 2017 / 01 / 01 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ငါငါးဖမ်းသမား 5.5 ရှိတယ် ... by cliffjohnsen
သင်ငွေ့ရည်ဖွဲ့ကိုဖြတ်ပြီးအဘယ်အရာကိုခုခံစာဖတ်ရပါသလဲ? ဒါဟာမြင့်မားတဲ့ဖြစ်သင့်သည်။ တချို့ကဓါတ်ပုံတွေကိုကူညီလိမ့်မယ်။
ကတင်ပြ Xavier56 08: 30 - Wed, 2017 / 16 / 56 အပေါ်
ဂျွန်ဆင် 5.5 HP, CD-20 - အဘယ်သူမျှမ Spark
ငါအဘယ်သူမျှမ Spark အတူဂျွန်ဆင် 5.5 HP, CD-20 ရှိသည်။ အဆိုပါသို့ပြန်သွားရန်က Round ငါသည်ဤမော်တာ run မလေတခြားသူတစ်ဦးဦးအားဖြင့်ပြုပြင်ကြရမည်စတင်ခဲ့ပြီးခံခဲ့ရသည်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကနှစ်ယောက်ကနယူး coil, ငွေ့ရည်ဖွဲ့နှင့်အမှတ် installed ။ အစားထိုးမယ်ဆိုရင် sure- ထုပ်များအတွက် Spark Plug ဝါယာကြိုးများပြောပြခြင်း, ဝါယာကြိုးများအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခြေအနေသစ်ကိုကြည့်ရှုနေကြသည်မပေးနိုင်ခဲ့ပါ။ သငျသညျအမှုနိုင်ရန် plug ကိုများနှင့်လက်ကြည်လျှင်မှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမ Spark, မပင်အားနည်းမီးပွားရှိပါသည်။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောကျော်ပါကညျ့ရှုခဲ့ကြပြီးမည်သည့်ကိစ္စများမတှေ့နိုငျပါသညျ။ ငါ 1 ဖတ်ရှုပြီး954-1964 Evinrude 5.5 HP က Tune-UP Project မှစက်နှိုးစနစ် Tune-Up ကို။ ပုံကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အရာတစ်ခုခုမှားယွင်းနေ installed ခံခဲ့ရလျှင်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ Rechecked Gap Ok ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါပျောက်ဆုံးငါဘယ်အရာကိုမတှေ့နိုငျပါသညျ။ ရုပ်ပုံ ယူ. Tune တက်ရုပ်ပုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကွဲပြားခြားနားဘာမှမမြင်ရပါဘူး။ ငါမမီးပွားနှင့်အတူတဦးတည်းသော်လည်းမနှစ်ဦးစလုံးကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ မဆိုအကူအညီတောင်းတန်ဖိုးထားမည်ဖြစ်သည်။
ကတင်ပြ ttravis 09: 04 - မွန်, 2017 / 12 / 17 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ဂျွန်ဆင် 5.5 HP, CD-20 - အဘယ်သူမျှမ Spark by Xavier56
ငါအုမ်းမီတာ ယူ. ငွေ့ရည်ဖွဲ့နှင့်ကွိုင်စမ်းသပ်လိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်သင်တစ်ဦးမြေပြင်သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်မှုပြဿနာရှိပါကကြည့်ရှုရန်မီးပွား plug ကိုဝါယာကြိုးများစစ်ဆေးပါ။
ကတင်ပြ VintageRuns 09: 04 - မွန်, 2017 / 09 / 59 အပေါ်
1965 3hp ဂျွန်ဆင်
မေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏: ငါမကြာသေးမီကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း disassembled 1965 3hp ဂျွန်ဆင်ဝယ်ယူပေမယ့် Re-install စကိုရေပြွန်ဒုက္ခရှိခြင်းဖြစ်၏။ အဲဒီမှာရေပြွန်များ၏မော်တာစည်းဝေးပွဲကိုအဆုံးမှာသေးငယ်တဲ့ပလပ်စတစ် "bracket က" ဖြစ်ပါတယ် ... ငါမူကားအဘယ်မှာရှိမော်တာစည်းဝေးပွဲကိုသို့ဤအဆုံး install လုပ်ဖို့ကိုမမွငျနိုငျသညျ။ ငါ re-install ဤရေပြွန်ဖို့ကော်လံကနေမော်တာစည်းဝေးပွဲကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ရှိသည်ပါနဲ့။
ကတင်ပြ ttravis 09: 04 - မွန်, 2017 / 12 / 20 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ 1965 3hp ဂျွန်ဆင် by VintageRuns
ငါသည်ငါ့3HP ကအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ် ...
ငါဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမမှတ်မိနိုင်အောင်ငါခဏတစ်ဘို့အကြှနျုပျ၏အ3HP ကအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ ငါအချို့ youtube ကဗီဒီယိုတွေကိုသင်တို့အဘို့ရှာကြသည်သင်သည်အဘယ်သို့ပြသနိုင်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်မကြာသေးမီက powerhead ပယ်ခဲ့သူတစ်ဦးအတွက်ဆွဲလဲနှင့်သင့်မေးခွန်းကိုဖြေနိုင်သောထွက်အဲဒီမှာရှိတယ်ထင်ပါတယ်။
ကတင်ပြ MDM 09: 15 - Fri, 2017 / 15 / 12 အပေါ်
ငါ 53 3hp ဂျွန်ဆင်ပြန်လည်တည်ဆောက်နေပါတယ်။ ငါအမဲဆီသို့မဟုတ် locktite စသည်တို့ကဲ့သို့ချေး minimize ဖို့သော့ခလောက်အပေါ်ဘာမှသုံးရမည်နည်း အောက်ပိုင်းရိုးတံအပေါ်အဆစ်တွေနဲ့အတူတူ?
ကတင်ပြ ttravis 09: 16 - Sat, 2017 / 00 / 03 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ 3hp ဂျွန်ဆင် by MDM
အစဉ်မပြတ်ငါအပေါ်ဆန့်ကျင် seaze ထား ...
အစဉ်မပြတ်ငါပါဝင်ပတ်သက်ကွဲပြားခြားနားသောသတ္တုများရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်သောအခါ, သော့ခလောက်အပေါ်ဆန့်ကျင် seaze ထားတော်မူ၏။ သင်ကိုယ်တိုင်သင်တုံးဝက်အူဖြုတ်နောက်တစ်ကြိမ်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်။ ရှုပ်ထွေးပေမယ့်ကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယ။ https://www.amazon.com/Permatex-80078-Anti-Seize-Lubricant-Bottle/dp/B0…
ကတင်ပြ 19evinridelvr58 10: 04 - Wed, 2017 / 20 / 24 အပေါ်
extension ကို Add
ကျွန်မလူသိရှင်ကြားဒီထွက်ချပြီးအဘို့အ apolagize ပေမယ့်ကိုယ့်ကိုအလင့်ထားသည်မျှအဆက်အသွယ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ကြောင့်ကိုယ့် GE မပြုနိုင်သောကွောငျ့ဈဘာမှအမှုကိုပြုရမရနိုငျပျောက်သွားပြီးတော့တစ်စက္ကန့်ကိုမီးပေါ်လာအဲဒီ Add extension ကိုအနည်းငယ်အနက်ရောင်သေတ္တာကိုနှိပ်ပါငါ့ကိုပြောထားသည်ကို download လုပ်နှိပ်လျှင်သုံး lightwin 1958 evinrude များအတွက်ပိုင်ရှင်တွေကို manual ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် im tryin
ဒီအတိတ် t ... site ကိုမှာအားလုံးအလွန်အသုံးပြုသူ friendly..boot မဟုတ်ပါဘူး
ကတင်ပြ ttravis 10: 05 - Thu, 2017 / 07 / 58 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ extension ကို Add by 19evinridelvr58
သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ငါဒီ site ကို fix နှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်သည်ဟုအားနည်းချက်တွေကိုထောက်ပြကြောင်းမှတ်ချက်များကိုကြိုဆိုပါတယ်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ့် Evinrude / ဂျွန်ဆင် / OMC / BRP အစဉ်အဆက်ကိုဖန်ဆင်းသောလှေပဲ့ချိတ်မော်တော်အတွက်ချပြီးပြီးဆုံးနှင့်တက်ကြွစွာဦးချင်းစီမော်တာများအတွက်အစိတ်အပိုင်းများ၏စာရင်းကိုအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ ငါအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန်လုပ်ချင်အများအပြား tweeks ရှိပါတယ်။
ငါသည်သင်တို့ကိုသင်ဤမြင်သောအခါပေါ်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာစာမျက်နှာထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေပါ၏။ ငါကြောင့် manual ၏တစ်ဦးကို PDF file ကို download လုပ်ပါမှ link တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်မထင်ခဲ့ပေ။ ငါထံသို့ ဝင်. http://outboard-boat-motor-repair.com/Evinrude%203%20HP%20Lightwin%20Ou… ငါမူကားသင်တို့အပေါ်မှာနှိပ်လိုက်အဘယ်အရာကိုမသိရပါဘူး။
ကသင်သည်အဘယ်သို့ဖိုင်တစ်ခုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အပေါ်နှိပ်လိုက်မျက်နှာပြင်အနီးထိပ်မှာအမှန်တကယ်တစ်ဦးမှာ google ကြော်ငြာခဲ့ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါသလော ဤတွင်ကျွန်မရှုပ်ထွေးဖြစ်နိုင်သည်ထင်ကြော်ငြာ၏မျက်နှာပြင်, shot ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းအပေါ်ကျွန်မနည်းနည်းထိန်းချုပ် Google ကတက်ကိုထည့်လေ့မရှိကြောင်းဖြည့်စွက်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကဒီ site ကိုများအတွက်ပေးဆောင်ကူညီကြဘူး။ ငါသဘောတူဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကြော်ငြာပိတ်ဆို့နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါကအထင်မြင်မှားစေသောဖြစ်ပါသည်, မြင်လိမ့်မည်။
ငါ PDF ဖိုင်တွေ့ပါကတစ်ဦး link ကိုဖွင့်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါမြင်ပါလိမ့်မယ်။
ကတင်ပြ ttravis 10: 05 - Thu, 2017 / 08 / 10 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ သွားရောက်လည်ပတ်နဲ့ကျွန်မအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် ... by ttravis
ငါကြောင့်အထူးသဖြင့်ကြော်ငြာပိတ်ဆို့ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဤသူသည်ငါဒါနဲ့သစ်ကိုတစ်ခုခုသင်ယူပိတ်ဆို့ပထမဦးဆုံးကြော်ငြာဖြစ်ပါတယ်။ ငါ PDF ဖိုင်ရှာတှေ့နိုငျပါလျှင်ငါမြင်လိမ့်မည်။ ဒါဟာဖြစ်ကောင်းအဟောင်း site ကိုအတွက်တစ်နေရာရာ burried ဖြစ်ပါတယ် http://old.outboard-boat-motor-repair.com